गरम देउवाले किन ओढ्दैछन् 'नम्रताको कोट'?
2nd July 2021, 09:39 am | १८ असार २०७८
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई 'वेटिङ पिएम' भन्दै विपक्षी गठबन्धनले सम्पादकदेखि लेखकसँग लगालग छलफल गरिसकेका छन्। सधैं स्टेज चढेर माइक समातेर आफ्नो कुरामात्र सुनाउने दलका नेताहरु अहिले चुपचाप अरुका कुरा सुन्दैछन्।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव समूह र जनमोर्चाले चलाएको छलफलको चौथो शृंखलासम्मको छलफल हेर्दा गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका देउवाले काँध पनि फेरेका छैनन्। त्यसो त जसपा र जनमोर्चाले बोल्ने वक्ता फेरबदल गरिरहे पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि देउवाको साथसाथै देखिएका छन्।
नम्र बन्दै देउवा
प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेयता देउवा सार्वजनिक मञ्चहरुमा बढी नै नम्र देखिन थालेका छन्। त्यस्तै परे, 'मैले जान्या छु' भन्नसम्म पछि नपर्ने देउवाको रौद्र रुप धेरैले सामना गरेको हुनुपर्छ। प्राय सञ्चारकर्मी र नेताहरुको सवालमा झोक्किने गर्छन् देउवा।
पछिल्लोपटक कांग्रेस महाधिवेशनबारे विवाद बढ्दा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग देउवाको चर्काचर्की नै परेको थियो। सार्वजनिक कार्यक्रममै पौडेलसँग नोकझोक गर्ने अनि सञ्चारकर्मीसँग च्याठिने देउवाको रुप अहिले फेरिएको छ।
छलफल कार्यक्रममा हुँदै लचक
'म त भाषण पनि धेरै गर्न जान्दिनँ हेर्नुस्,' आफ्नो नाकमा लाग्ने खालको कुनै प्रश्न भए एकाएक पारो तताइहाल्ने देउवाले असार १२ गते शनिवार नयाँ बानेश्वरको संसद भवनमा आयोजित राजनीतिक बिटका पत्रकारसँग भने। आफूविरुद्ध विभिन्न प्रश्न वर्षाएपछि सुरुमै देउवाले भनेका थिए, 'म त धेरै अप्ठेरोमा पर्छु जस्तो लागेको थियो, तर सोध्नु भएन। यसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।'
संवैधानिक निकायमा कांग्रेस सभापति देउवाका नजिकका व्यक्तिहरु नियुक्त भए भनेका छन्। यस सन्दर्भमा देउवाको भनाई के हो?
पत्रकारहरुले संवैधानिक निकायमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग साँठसाँठ रहेको प्रश्न सोधे पनि देउवाले उक्त प्रश्नको वास्तै नगरी शुरुमै यस्तो प्रतिक्रया दिएका थिए।
देउवाले पहिले दायाँका कम्युनिस्टसँग पनि मिल्दैनौँ। बायाँका कम्युनिस्टसँगमिल्दैनौँ भनेका थिए। अहिले दयाँ पनि बयाँ पनि कम्युनिस्ट राखेर कांग्रेसउभिएको छ, यसको सैद्धान्तिक जवाफ के हो?
नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको संघारमा छ। सभापतिज्यू महाधिवेशन गर्नुपर्ने बेला गठबन्धन गरेर बरालिएर हिँडेको छ, किन?
पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रतिगमनको पक्षधर भनेर देउवामाथि आरोप छ?
देउवामाथि यसरी प्रश्न वर्षिए पनि उनले सुरुमै हाँस्दै यी प्रश्नलाई 'स्किप' गरे।
उसो त सामान्यतय ५-६ मिनेटमात्र बोल्ने देउवा उक्त दिन १५ मिनेट बढी बोलेका थिए। यद्यपि बोल्ने क्रममा उनले भन्न भ्याए, 'म त भाषण पनि धेरै गर्न जान्दिनँ हेर्नुस्।'
आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि व्यंग्य गर्न भ्याए। उनले भने, 'पार्टीको महाधिवेशन आएको छ। मैले उठ्ने विचार गरेको छु। देशभरका साथीहरुले सहयोग गरे पार्टी सभापति बनुँला। रामचन्द्रजीले गर्नुभयो कि भएन थाहा भएन मैले त गरिसक्या छु।'
त्यसको दुई दिनपछि बानेश्वरमै नागरिक समाजसँग गरिएको छलफलमा देउवाले वकिलहरुको प्रशंसामा आफ्नो समय खर्चे। देउवाले सबैभन्दा बढी प्रशंसा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तारोमा परेका बाजे वकिलको गरे।
'कृष्णप्रसाद भण्डारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी विद्यार्थी हुदाँखेरी हाम्रो चाही कहिले पनि फिस लिनुभएन उहाँले,' देउवाले भने। यस्तै, देउवाले राजाको बेलामा सित्तैमा वकालत गरेर भण्डारीले छुटाएको बताए। अहिले पनि भण्डारीले गरिरहेको वकालत लोकतन्त्रका पक्षमा भएको उनको भनाई थियो।
'राजकाल हुँदा पनि फ्रि अफ कस्ट वकालत गरेर उहाँले छुटाउनुभयो। उहाँ अहिले पनि लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गरिरहनुभएको छ। मेरो र मेरो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु,' देउवाले भने।
'सबैले बाजे वकिल भन्छन्। कृष्णप्रसाद भण्डारीजस्तो व्यक्ति आउनुभयो। रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने मान्छेलाई पनि रेस्पेक्ट गर्न नसक्ने मान्छेले के देश चलाउँछ? के देश बनाउँछ?' ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै देउवाले भने।
पुस ५ गते ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनका बेला ओलीको विपक्षमा वकालत गरेका भण्डारीका बारेमा ओलीले गरेको टिप्पणीबारे चर्को आलोचना भएको थियो।
बुधवार बानेश्वरमै नागरिक समाज र लेखकहरुसँगको छलफलमा पनि देउवा नम्र देखिए। यद्यपि ओलीसँग भने देउवा आक्रमक नै देखिएका थिए। माधव नेपाललाई अन्याय भएको र छिट्टै न्याय पाउने उल्लेख गर्दै देउवाले भने, ‘ओलीजीले धम्काउने तर्साउने काम गर्नुभएको छ। को छ यहाँ डराउने?’
तर आफूले बोल्नेबारे भने पुन: नम्र देखिए। प्रचण्ड र माधव नेपालतिर हेर्दै देउवाले भने, 'म त्यति लामो बोल्न जान्ने मान्छे पनि होइन।'
१२ मिनेटभन्दा धेरै समय लिएर बोलेका देउवाले आफूमाथि उठेका धेरै प्रश्नहरुको यो दिन पनि 'स्किप' गर्न भ्याए। सम्बोधनको सुरुमै उनले भने,'वास्तवमा भन्ने हो भने मलाई त पहिले धेरै गलाए। ठीकै छ धेरै धेरै धेरै धन्यवाद। आज फ्रेन्ड्ली क्वेसन धेरै आएको छ। नत्र कमै सोधिए पनि धेरै कडा कडा सोध्छन्।'
किन नम्र हुँदैछन् देउवा?
विपक्षी दलले 'वेटिङ पिएम'का रुपमा हेरेका देउवालाई आफ्नै दलले भने प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्दैनन्। पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटनका बेला देउवाको पक्षमा माहोल बन्दा कांग्रेसमा देउवा इतरले उनलाई सरकारमा सहभागी हुनै नहुने चेतावनी दिँदै आएका थिए।
देउवा पनि निर्वाचनतिर मोडिएका थिए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सडकबाट सर्वोच्चलाई धम्की दिन नहुने जिकिर त्यतिबेला देउवाको थियो। प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश बन्दै गर्दा देउवाको लागि बालुवाटारमा 'एट्मोस्फेयर' बन्दै थियो। यद्यपि कांग्रेसको कचिंगलले प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम लगायतले काँध थाप्न आउँदा पनि देउवा सत्तारोहणमा निस्केनन्।
पछि जब वातावरण विग्रँदै गयो, अनि सत्तामा जान सक्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गयो तब संस्थापन इतरका नेताहरुले देउवालाई सत्ताको नेतृत्व गर्नै पर्ने दबाव दिन थाल्यो। ओलीले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गरेपछि पार्टीभित्रको लथालिंग अवस्थालाई थुम्थुम्याउन भए पनि देउवाले आफूइतरका पक्षको आवाजको सम्बोधन गर्न बाध्य भए। जसका कारण अहिले देउवा पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। अनि उनी आफ्नो साख जोगाउन सर्वोच्चैसम्म धाएका छन्। विपक्षी सांसदहरुको सनाखत गरेको रिटलाई सर्वोच्चको आदेशले सदर गरिदिएमा देउवा प्रधानमन्त्री पक्कै बन्छन्। यसका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन पनि बदर हुनुपर्छ। नभए यसै भन्न सकिन्छ।
यही नेतृत्व सम्हाल्नका लागि देउवा पछिल्लोपटक नम्र भएको बताइन्छ। यसो त १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा दोहोरिने इच्छासमेत देखाइसकेकाले पनि कार्यकर्ताको मन लोभ्याउन देउवाको 'ट्रिक' हुनसक्छ - नम्रताको कोट। कांग्रेस फेरि हाँक्ने र सत्ताको बागडोर पुन सम्हाल्ने चाहना राखेका देउवाले यस्तो नम्रताको कोटचाहि कतिञ्जेल ओढ्ने हुन्, त्यो पनि समयले नै बताउँला।